Kaynaan Warsame, waxa uu dhashay sanadku markuu ahaay 1978 waxa uuna ku dhashay Soomaaliya gobalka Banaadir magaalo madaxda Muqdisho gaar ahaan dagmada caanka ah ee wardhiigley. Kaynaan ayaa waxa uu ka soo tagay wadankiisa hooyo sanadkii 1991 kii, kadib markeey ka baxday meesha maamulkii dowladii dhexe ee Soomaalia, ee uu madaxweynaha ka ahaa jaale General Maxamed Siyaad Barre, Rabi naxariisti jano ha ka warabiyee ...AAMIIN . Kaynaan ayaa ah qof heesta dhalashada Kanada, waa Somalian Kanadian. Kaynaan waxa uu qaadaa heesaha loo yaqaano rap, hip hop, pop iyo rock. K'naan waxa uu kasoo jeedaa Gobolada Dhexe Gaar ahaan Galmudug
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=K%27naan&oldid=206638"
Last edited on 24 Oktoobar 2020, at 03:16
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Oktoobar 2020, marka ee eheed 03:16.